Etu ị ga-esi kwe ka ndị ahịa gị gbasaa mkpọsa gị ọzọ | Martech Zone
Etu ị ga-esi kwe ka ndị ahịa gị gbasaa mgbasa ozi gị ọzọ
Tọzdee, Disemba 16, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, anyị wụnye Ooma - ihe ngwọta VOIP maka ụlọ ma ọ bụ obere azụmahịa. Ọ dị oke ịtụnanya - ọbụlagodi ijikọ Google Voice (nke bụ nọmba ekwentị ụlọ ọrụ anyị). Taa, anyị natara email a ma hụ ya n'anya n'otu ntabi anya.
Ajụjụ a bụ naanị ajụjụ ịchọrọ ịjụ ndị ahịa gị ma afọ ojuju. Mgbe ndị ahịa gị tinyere aha ha n’ahịrị iji kwado azụmahịa gị, ị mara na ị na-arụ nnukwu ọrụ.
A otu ajụjụ nnyocha e mere dị ka nke a dịkwa mkpa karịsịa ụbọchị ndị a… Enweghị m oge na-aga n'ime nkọwa na-aza ụfọdụ oke nnyocha e mere. Ozugbo ịpịrị nyocha a, ebutere gị gaa peeji ọdịda na ire 1 site na 10 na mpaghara nhọrọ abụọ maka ozi kọntaktị gị.
Ozugbo ịmechara nyocha gị, ewetara gị na peeji ọdịda ọzọ:
Amamiihe! Ibe ọdịda a na-agụnye mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji soro ndị enyi gị kerịta onyinye pụrụ iche. Ikwuru na ikwadoro ya… ugbua Ooma na agwa gi ka iga n'ihu. Nke a bụ otu n'ime ozi email kachasị dị mfe nke ọma, ọdịda peeji nke yana mgbasa ozi agbakọtara ọnụ nke m hụrụ.
A na-akwado mkpọsa ahụ Zuberance, onye nwere nkwupụta ozi na-esonụ:
Mgbasa mgbasa ozi bụ ike dị egwu, enweghị ike ịgbanwe ahịa. Ebumnuche anyị na Zuberance bụ ime ka ndị na-ere ahịa nwee ike ijikwa ike nke mmekọrịta mmadụ na ibe ha iji dọọ ụzọ ruru eru, okporo ụzọ na ahịa. Anyị na-eme nke a site n’inye ndị na-ere ahịa ihe ngwanrọ nke teknụzụ dị ike nke na-eme ka ọ dị mfe itinye aka ma nye ike ịkwado ndị na-akwado Brand on Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Yelp, webụsaịtị webụ, ngwaọrụ mkpanaka, na ndị ọzọ.
Mmasị: Email Template Inspiration
Tụgharịa LinkedIn ka ọ bụrụ CRM na Diigo